ညတာရှည်မဲ့ ည ( အချစ်ဝတ္ထု ) 18 + | OKKALA STORE
Commitment (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Reign of Assassins (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
I Saw the Devil(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
အခုတလော အွန်လိုင်းတွင် နာမည်ကြီးနေသာ "ဖား"သည်မသား ...
Jobs (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Skin Trade (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Breaking the Girls (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး (18+)
The Host (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Gandarmar Whole Sales ...
အဟုတ်မှတ်လို့ ကြည့်နေတာ သေရော...ဒါနဲ့ ဘာမြင်လိုက်လ...
ဧပြီလ (၁၄) ရက်နေ့ ၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ ရန်ကုန်၊ လေးထေ...
ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်က...
ဧပြီလ (၁၄) ရက်နေ့ ၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ ရန်ကုန်၊ ကန်တေ...
I Fine Thank You, Love You မြန်မာစာတန်းထိုး
EXO Fan များအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာသော_CALL ME BABY (叫...
GIRLS' GENERATION ရဲ့ သီချင်းသစ်လေးပါ_Catch Me If ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၆ မြန်မာ့သင်္ကြန် ♥♥♥♥♥♥♥
Cinderella (2015) - အခုလက်ရှိရုံတင်ပြသနေသော စင်ဒရဲ...
ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Myanmar Event Park မှာ ...
ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး Fast & Furious7Full Movi...
Youtube Music Award 2015 ( Channel Myanmar )
A Tale of Legendary Libido(2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
‪‎ပြည်‬မှာ ဂတုံးတစ်ယောက် ( ဟာသ သီချင်းလေးပါ အားလုံ...
မာယာပရောဂျက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ( နေတိုး + သက်မွန...
Good Girl 2014 ( Korea Love Movie ♥♥♥)
ကူညီပါရစေ ( အချစ်ဝတ္ထူကြီး ♥♥♥ )
ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Taw Win Garden Hotel မှ...
အကွက်ရွှေ့တယ်နော် ဇေရဲထက် ရဲအောင် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်
ဘုတ်ဆုံရဲ့လင်ဒေါ်ကျင်ရဲ့သမက်ဘခက်ရဲ့ယောက်ဖ ပြေတီဦး ...
ညတာရှည်မဲ့ ည ... ဆောင်း တွင်း မို့ စောင် ခြုံ ပြီး ကွေး လို့ကောင်း ချိန် နာ ရီ နှိုး စက် က အ လိုက် မ သိ ထ မြည် သည်..။ ဖေ ၀င်း မောင် အိပ် ရာ က လူး လဲ ထ တယ် ။။ဖေ ၀င်း မောင် နောက် လ ဆို အ သက် ၄၅ နှစ် ပြည့်မှာ ဖြစ် ပါ တယ်...။ အိမ် ထောင် သက် နှစ် ၂၀ ရှိ လာ ပြီး သ မီး ကြီး က ၁၉ နှစ် သား အ ငယ် က ၁၇ နှစ် ဖြစ် လာ တဲ့အ ချိန် မ ယား ဖြစ် တဲ့ခိုင် ချို မာ လဲ သား သ မီး တွေ အရွယ် ရောက် လာ လို့က တ ကြောင်း သူ မ က လဲ တ ဖက် တ လမ်း က စီး ပွါး ရှာ နေ ပြီး လူ ရော စိတ် ပါ ပင် ပန်း လို့က တ ကြောင်း ဆို တဲ့ဆင် ခြေ တွေ နဲ့ ဖေ ၀င်း မောင် နဲ့မ အိပ် တော့ ...။
Posted by okkala net at 8:47 PM
Ko Ko February 7, 2017 at 5:10 AM
Ko Ko February 7, 2017 at 5:16 AM
Ko Ko February 7, 2017 at 6:26 AM